Companion Card - Somali
Waxaad siyaabahaan soo socda ku heli kartaa macluumaad qoran iyo mid af ah oo ku saabsan kaarka loo yaqaan Companion Card kuna qoran afka Soomaaliga;
La soo bax dukumintiyadaan:
Waxaad kula soo bixi kartaa mid ah buugga qofka sita kaarka loo yaqaan Companion Card Cardholder Handbook oo ah af Soomaali (PDF, 484KB, 20 bog), kaas oo bixinaya macluumaad ku saabsan barnaamijka loo yaqaan Companion Card Program, waxaana ku jira macluumaadkaas shuruudaha laga rabo qofka isticmaalaya kaarka qofka la socda qofka iinta leh (Companion Card). Dukumintigaasi wuxuu sharxayaa macluumaadka looga baahan yahay in lagu buuxiyo Foomka Dalabka Qofka kaarka sita. Buuggaan waxaa lagu kaydiyey habka loo yaqaan Adobe Portable Document Format (PDF). Si aad u hesho dukumintigaan waxaad u baahan doontaa midka akhriyi kara habkaan oo loo yaqaan Adobe Reader. Badanaa kani wuxuu ku duuban yahay kumbuyuutarkaaga, haddii kale waxaad kala soo bixi kartaa websaytka loo yaqaan Adobe web site (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). Haddii aad wax dhibaato ah ku qabto la soo bixida lifaaqyada, fadlan email u soo dir: Companion Card webmaster@dpcd.vic.gov.au ama arag hoos si aad u raadiso xal kale oo ku saabsan hellitaanka dukumintiyada.
Waxaad awoodaa inaad kala soo baxdo Foomka Dalabka Qofka Sita Kaarka loo yaqaan Companion Card (Companion Card Cardholder Application Form) (PDF, 213KB, 16 bog). Haddii aad doonayso inaad dalbato kaarka Companion Card, waxaa waajiba inaad daabacato isla markaana buuxiso Foomka Dalabka (Application Form). Foomkani wuxuu ku qoran yahay Ingiriis waana in lagu buuxiyaa Ingiriis. Buuggaan waxaa lagu kaydiyey habka loo yaqaan Adobe PDF format.
Waxaad dhegaysan kartaa macluumaadka duuban oo ku saaban Companion Card kuna duuban afka Soomaaliga adigoo soo wacaya> 1300 305 615.
La xiriir Khadka Macluumaadka Companion Card:
Haddii macluumaadka aad u baahan tahay aan lagu soo qorin buugga ama aanu ku jirin macluumaadka duuban, waxaa laga yaabaa in shaqaalaha Khadka Macluumaadka Companion Card ay kaa caawimi karaan waxweydiintaada. Wac khadka macluumaadka duuban raacna awaamiirta si aad toos ugu xirato afka Soomaaliga - Turjubaan hadlaya ayaa ku caawimi doona si aad ula hadasho Khadka Macluumaadka ee Companion.
Haddii qofka soo wacayaa Ingiriis ku hadlo, sida ugu fiican uguna sahlani waa la xiriirida Khadka Macluumaadka ee Companion Card nambarkiisa tooska ahina waa 1800 650 611.
Hel dukuminti boosta laguu soo dhigo:
Khadka Macluumaadka ee Companion Card wuxuu qabanqaabin karaa Buugga Qofka Sita Kaarka iyo Foomka Dalabka in boosta laguu soo dhigo haddii aadan doonayn inaad kala soo baxdo websaytka barnaamijkaan.